Puntland oo ka laabatay go’aan ay horay u qaadatay oo la xiriiray ka hor taga Coronovirus - BANDHIGA
Maamulka Puntland ee uu hogaamiyo ayaa dib uga laabtay Go’aankii maalin kahor ay ku xireen Masaajidda ku yaalla Magaalada Garoowe ee Xarunta Gobolka Nugaal iyo deegaanada kale ee maamulkaas.
Wasiirka Caddaalada, arrimaha Diinta iyo Dhaqan-celinta Puntland Cawil Sheekh Xaamud oo shalay soo saaray Amarka ah in la xiro dhammaan masaajidda Puntland muddo laba todobaad ayaa waxaa uu shaaciyay in Puntland ay Go’aankaas dib uga laabatay.
Wasiir Cawil Sheekh Xaamuda oo kulan la qaatay Culimada ayaa waxaa uu sheegay in Go’aan lagu gaaray in dib loo furo Masaajida, hayeeshee la isla gartay in la xiro Musqulaha, si looga hortego faafida Cudurka Coronavirus.
Ugu dambeyntii Wasiirka Caddaalada, arrimaha Diinta iyo Dhaqan-celinta Puntland ayaa si cad u sheegay in dhamaan Maasjidada ku yaalla deegaanada Puntland ay furnaan doonaan, balse markii la helo Kiiska COVID-19 la xiri doono.
Si kastaba Culimada deegaanada Puntland ayaa kasoo horjeestay Go’aanka marka hore ay Puntland ku amartay in la xiro dhammaan masaajidda Puntland, hayeeshee dib ayaa looga laabtay Arrintaas.
By : Press room Tags: Puntland oo ka laabatay go’aan ay horay u qaadatay oo la xiriiray ka hor taga Coronovirus
Deg Deg: Somaliland oo xirtay xuduudaha ay la wadaagto dalalka deriska la ah